कसरी बने रेस्टुराँमा भाँडा माझ्ने भट्ट २९० रेस्टुराँका मालिक ? | Sambad Media
कसरी बने रेस्टुराँमा भाँडा माझ्ने भट्ट २९० रेस्टुराँका मालिक ?
काठमाडौँ, २२ असोज । अध्ययनका लागि २० वर्षअघि जापान पुग्नुभएका गोरखाका भवन भट्ट अहिले जापानमा सफल व्यवसायीका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ ।
अहिलेसम्म भट्टबाहेक अरुले एनआरएनको अध्यक्षमा औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् । उम्मेदवारी दिइहालेमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि आफू तयार रहेको भट्ट बताउनुहन्छ ।–किरण भट्टराई /रासस